छाता सहितको ज्यकेट , नेपालमा कति पर्छ मूल्य ? – kollywood hungama
छाता सहितको ज्यकेट , नेपालमा कति पर्छ मूल्य ?
नेपालमा यतिबेला वर्षातको समय छ । ब्यस्त मानीसका लागी बाहिर हिडडुल गर्दा सहज खोज्छन् । बर्खाको समयमा पानी परेका बेला हिडडुल गर्न सहज होस भनेर बिभिन्न कम्पनीहरुले बिभिन्न प्रकारका रेनकोट र छाता बजारमा ल्याएका छन् । तर छाता र रेनकोट फरक फरक रुपमा किन्न नपर्ने भएको छ ।
पानी पर्दा सबैले खोज्ने वस्तु भनेकै छाता हो । छाता वर्षाको भरपर्दो साथी भए पनि अरू बेला बोक्न र ओढ्नै पर्दा पनि झन्झटिलो सामग्री हो । यही झन्झट कम होस् भनेर बेलायतका एक डिजाइनरले नौलो किसिमको छाता बजारमा ल्याएका छन् । बेलायतमा वर्षा महिना सुरु हुन लागेको मौका छोपेर ‘अम्ब्रेला ज्याकेट’ बजारमा ल्याइएको छ । लगाउन, पट्याउन र हिँड्डुल गर्दा दुवै हात सजिलै चलाउन मिल्ने यो ज्याकेटले व्यापक लोकप्रियतासमेत पाइरहेको छ । अहिले बेलायतको स्थानीय बजारमा यसको मूल्य करिब १ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्छ ।
Previous भ्रुण हत्या महा अपराध हो ! यो संदेश मुलक भिडियो .. सक्दो सेयर गर्नुहोला !!
Next १ नं प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. तुम्वाहाङद्वारा आज दुई विधेयक प्रमाणीकरण